Geirangerfjord, mara mma fjord ebe a na-esegharị Wave | Akụkọ Njem
Geirangerfjord, mara mma fjord ebe a na-esegharị Wave
Otu karịrị karịa ọdachi nkiri na ndị America na-ese ihe nkiri mgbe mgbe. Ọ bụrụ na ọ bụghị oke ala ọma jijiji, ọ bụ ndị ọbịa, mana meteorite, mana ọrịa zombie. Isiokwu a bụ ọdachi na mkpochapụ na onye ọ bụla nwere ike maka onwe ya.
Ọ bụ ihe dị egwu mgbe ahụ ka ndị Norwegans banye n'otu ụdị ihe nkiri ahụ, mana ha emeela ya na fim ahụ Ebili mmiri. Anyị hụrụ ya na ihe nkiri na 2015 ma ụfọdụ n’ime anyị nwere ọ enjoyedụ na ya mgbe e mesịrị na Netflix, naanị iji hụ a thriller ọdachi n’asụsụ ọzọ na-abụghị Bekee. Ma ọ dịkarịa ala na nke m, iji nwee obi ụtọ mara mma nke Norwegian fjords.
1 Na Geirangerfjord
2 Ebili mmiri na ebili mmiri
3 Nleta Geiranger
Norway nwere ọtụtụ fjords mara mma ma otu n'ime ndị kasị touristic ọ bụ. Ọ dị na Romsdal County, na mpaghara More, ma nwee ihe 15 kilomita ogologo ịbụ kwa ogwe aka nke fjord ọzọ, Sunnylvsfjorden na nke a na ntụgharị nke ọzọ dị ukwuu, bụ Storfjorden.
Kemgbe 2005 ọ bụ ihe nketa ụwa, nsọpụrụ nke ya na fjord ọzọ dị nso na-ekerịta. Nwere ụfọdụ ọmarịcha waterfallss dị ka ama Nwanyị Nwanyị Asaa. Ndị a bụ iyi asaa dị iche iche na-etolite mmiri mmiri asaa, nke kachasị elu ya ruru 250 mita. Ha nwere aha a mara mma n'ihi na akụkọ akụkọ na-ebu ha nke na-akọ banyere ụmụnne nwanyị asaa ndị gbara egwu n'okpuru ugwu mgbe ha si n'elu chọọ ha. Ọzọ ama na nsụda mmiri bụ Mmiri mmiri mmiri. Ha abụọ na-eche ibe ha ihu.
Fjord o nwere nnuku ugwu ma gbaa nkọ ma gbaa gburugburu gburugburu ya na ogwe aka nke oke osimiri di warawara nke mere na nchikota di egwu. Ọ bụrụ na anyị tinye waterfalls ebe a na ọ bụ ihe magburu onwe. Ọ bụ ezie na n'oge ndị ọzọ ndị mmadụ biri ebe a, na ugwu ugbo na obodo ntàTaa, a na-agbahapụ ọtụtụ n'ime ha.
Fọdụ nwere ike iru n'ụkwụ, na njem ndị a n'èzí na ndị Norwegian hụrụ n'anya nke ukwuu, ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri. Njem ndị ahụ dị ize ndụ ebe ọ bụ na enweghị akwa mmiri na ụzọ ụkwụ na-araparakarị na nnukwu ugwu. Offọdụ n’ime ndị a na-agakarị n’oge ọkọchị bụ Knivsfla, Blemberg ma ọ bụ Skagefla. Ugbu a enwere ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke na-eje ozi dị ka njem nlegharị anya nke na-aga n'ihu n'etiti obere obere obodo dị ka Geiranger na Hellesylt.
Ebili mmiri na ebili mmiri
Karịa nke ahụ Ogologo ihe nkiri bụ ihe nkiri dabere na ihe omume nwere ike ime. N'ezie, a kọọla otu ihe mere eme na mbido nke emere na Eprel 1934. Mgbe ahụ oke ugwu si na ugwu ahụ pụta bụ tsunami nke bibiri obodo Tajford na-egbu ihe dị ka mmadụ 40 na tupu nke ahụ, na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, ihe yiri nke ahụ mere. N’ezie, ọ ga-ekwe omume oge ọ bụla ọzọ.
Eziokwu bụ na e wuru obere obodo Geiranger, bụ ebe ndị njem nleta na njedebe nke fjord n'ọnụ ọnụ Osimiri Geirangelva. Ugwu Akerneset nke na-abanye n'ime fjord A na-enyocha ya oge niile, dị ka anyị na-ahụ na ihe nkiri a, n'ihi na ọ bụrụ na ọ daa, ọ ga-ewepụta oke tsunami nke ga-ebibi ọ bụghị otu obodo mana ọtụtụ n'ime naanị 10 nkeji.
Ugwu nwere mgbape na-agbasa na nha nke abụọ na 15 centimeters kwa afọ na ha anaghị akwụsị ịnwa ịgbakọ etu ọ ga-esi adị, mgbe na ihe ọghọm enwere ike ihu ma ọ bụrụ ugwu ugwu 1500 dị na fjord.
Ndị ọkà mmụta banyere ala na-eme atụmatụ na ọ bụrụ na mbuze ahụ mere, ọ ga - abụ ihe dịka nde cubic 50 (okpukpu abụọ nke ọdịda abụọ nke narị afọ nke XNUMX): nkume ndị dị na mmiri nke fjord ga - ebute oke ebili mmiri, mbufịt, ihe dị ka mita 30 n'ịdị elu nke ahụ ga-ebibi ụsọ oké osimiri ahụ dum na-aga n'ihu.
Otu ụlọ nke a pụrụ ịhụ n’ebe dị anya dị egwu, nke ahụ bụkwa na mbụ enwere otu ugbo ebe a taa ka agbahapụ. Ọnọdụ a bụ ihe ịtụnanya ma echekwala ya n'ihi na ọ na - anọchi anya ụdị ndụ ọjọọ na fjords, mana eziokwu bụ na ebe ahụ dị egwu: ọ bụ naanị mmiri na - arịa ya, ọ bụ naanị 100 mita karịa oke osimiri na na Ndagwurugwu nke nwere ike iburu nnukwu mmiri ... Ọ bụ ezie na ndị na-ewu ya weere ya na akaụntụ ma hụ ka elu ụlọ ndị ahụ si dị elu nke mkpọda ahụ ka nnukwu mmiri nwee ike ịfefe na ha, ọ ka na-atụ egwu .. .
Ihe a niile na - agbakwunye ihe nkiri ọdachi n'ihi ya, a mụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọfịs kacha ọhụrụ na Norway (a họrọlarị ya ka ọ bụrụ ihe nkiri kachasị mma maka Oscars…). Emere ihe nkiri ahụ na Geiranger na ime ụlọ na Studio na Romania. Ntinye ego ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde euro isii ma ọ bụrụ na anyị chere na na Norway ọ rere 30% karịa ihe nkiri karịa Jurassic World… ọ bụ ihe ịga nke ọma!
Ọ bụrụ na ihe nkiri a masịrị gị n'oge ọkọchị a, ị ga-agagharị na fjords ndị Norway. Ọdụ ụgbọ mmiri nke Geiranger bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke atọ kachasị ukwuu na Norway na ọnwa njem nleta ọnwa anọ ọ na-enweta site na 140 ruo ụgbọ mmiri 180.
Ndi mmadu 250 bu onu ogugu nke ebe ahu ma n’oge ọkọchị, ihe karịrị ndị njem nleta 300 na-abata n’oge ọnwa ahụ niile. Enwere onyinye obibi dịgasị iche, ma site na ụlọ nkwari akụ ise dịka nke kampu, ya mere ị nwere ike ịhọrọ ebe ị ga-ehi ụra dabere na akpa gị. Olee otu i si eru ebe ahu? haze na njem ọ bụ nhọrọ: the Hurtigruten bụ ụsọ oké osimiri na-ejikọ Bergen na Geiranger.
I nwekwara ike ibata Site na ụgbọ elu site n'ofe mba ma ọ bụ site na bọs si Bergen, Oslo ma ọ bụ Trondheim. Ọzọkwa ị pụrụ ụgbọ okporo ígwè si Oslo ọ bụ ezie na njem ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa isii. Site na Trondheim ọ na-ewetụ obere obere mana ị ga-eji bọs gbagoo n'okporo ụzọ ugwu iji mesịa rute ebe ahụ. Kedu ihe ndị njem nleta ị nwere ike ime?
I nwere ike kayak, na ngwa ngwa na dizzying catamarans, gaa njem njem, jiri ụgbọ mmiri ma nwee ọ sunụ nke Northern Europe nke na-acha naanị n'oge anwụ n'oge ọkọchị. Ma ọ bara uru ikwu, ọ bụ ebe ga-apụ n'anya n'oge ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Geirangerfjord, mara mma fjord ebe a na-esegharị Wave
Echere na ọ naghị eme dị ka ọdachi Vajont Dam na Italytali, ihe nkiri ahụ mara mma nke mere n'ezie ebe ahụ.
10 nke osimiri kacha mma n'ụwa n'ụwa na 2017
Calanque D'En Vau, na mpụga Marseille